Mumakore achangopfuura, musayendisiti wezvinhu akagadzira kirasi nyowani ye312 mhando zvedongo zvinhu, zvakajairika fomura yeM3XZ2, pakati pavo, iyo M ndeimwe kana akati wandei ekuchinja kwesimbi zvinhu (senge Ti, V), X imwe kana kupfuura yeaya anotevera akakosha eboka chinhu, akati wandei III, IV makuru eboka zvinhu (senge Al Ge Si), Z chimwe chete kana zvinoverengeka zvisingaenzaniswi zvinhu (senge CNB, nezvimwewo), pane makumi matatu nemaviri ebonde rekudzidza kweternary. Compound Ti3SiC2 main Ti3AlC2 Ti3GeC2 vane imwechete yekristaro dhizaini, yakafanana nezve / MMC nzvimbo yebokaTypical mumiriri wemakemikari izvi ndizvo izvo Ti3SiC2 yakarongedzwa Ti3SiC2 zvedongo zvinhu Titanium yesilicon carbide Ti3SiC2 (Titanium yesilicon carbide) irudzi rwechinhu chakaumbwa ceramic zvinhu, zvine iko kushanda kwekupokana neakanyanya tembiricha oxidation kusagadzikana kwesimba rakakwira, uye simbi zvinhu senge iyo conductive machinability yeanopisa conductivity uye epurasitiki zvigadzirwa ekuvandudza mukana muma1980 s, zvine hungwaru nekuda kwekukurumidza kukurumidza opment yeanosimbisa mumiririri senge fiber, whisker uye avhiyesheni yakakwirira mukuremekedzwa kupfuura zvinodikanwa zveinjini, zvedongo matrix zvinoumbwa zvikave nzvimbo inopisa yekutsvagisaFibre, whisker yakawedzera kuomarara kwayo kunovandudzwa, asi nekuda kwekugadzirira kwemutengo wakakwira uye kusavimbika kuvimbika , zvichiri kunetsa kuisa kuti vagadzirise dambudziko iri vatsvagiri vakatanga kuongorora hunhu hwese simbi uye zvedongo zvinhu zvekupisa zvakanyanya, zvakazowanikwa muTi-Si-C system titanium silicon carbide Ti3SiC2 (Ti3SiC2) ine zvese hunhu. yesimbi pakamuri tembiricha ine yakanaka yekupisa yekudziisa uye yemagetsi conductivity, yakaderera vickers kuomarara uye yakakwira modulus yekusimba; Ductile mukamuri tembiricha, inogona kugadziriswa sesimbi, nepurasitiki pakakwirira tembiricha; Panguva imwecheteyo, ine zvivakwa ye zvedongo zvinhu, yakakwira goho simba, yakanyanya kusungunuka poindi, yakanyanya kudziya kutsiga uye yakanaka oxidation kuramba. Inogona kuchengetedza yakasimba simba pakakwirira tembiricha. Chii chakanyanya kukosha ndechekuti ine yakaderera kukweshesana coefficient uye yakanaka yekuzvizora-magadzirirwo mashandiro pane echinyakare solid lubricant.
Kubva munaDecember 2005, iyo State Ministry yeSainzi neTekinoroji munyika medu yakaburitsa zvine simba zvakati: imwe ine yakazvimirira yehungwaru kodzero dzezvivakwa, Ti3SiC2 inoitisa ceramic kugadzirwa kwechizvarwa chitsva cheiyo-inomhanya chitima pantograph inotsvedza mune yenyika 863 chirongwa , yepamusoro mashandiro ehurongwa hwezvinhu zvehunyanzvi misoro, zvemumba zvakagadziriswa nemari kubva kuchirongwa kuita yuniti Beijing jiaotong yunivhesiti mushure memakore maviri akateedzana kukunda iyo yakachena-yakachena Ti3SiC2, Ti3AlC2, Ti2SnC zvedongo upfu hombe synthesis tekinoroji, skateboard gadzira maitiro, kupedzisa kudzidza kwemuviri uye zvemakemikari zvivakwa, skateboarding kurodha bvunzo kumhanya. Iyo Ti3SiC2 yakateedzana zvedongo skateboards zvakabudirira kugadzirwa neboka iri rekutsvagisa zvine hunyanzvi hwekuita, kusagadzikana kushomeka, kuramba abrasion, arc ablation kuramba, kuderera kweabrasion yetambo yekutaurirana, nezvimwewo, kugadzirisa zvinetswa sekukurumidza kutsvaira kabhoni yakavakirwa uye upfu hwesimbi skateboards anoshandiswa pamba nekunze, zviri nyore kutyora, uye kukuvara kukuru kune yekutaurisa waya. Ti3SiC2 zvedongo skateboards zvakabudirira kugadzirwa mugore iro rakaita basa rakakosha mukuvandudzwa kwepamusoro-kumhanya njanji muChina.Ii. Main zvivakwa zveTi3SiC2 yakaturikiswa zvedongo zvinhu
Ti3SiC2 inosanganisa iyo zvivakwa zve ceramics nesimbi. Yayo yakakwira elastic modulus, yakanyanya kusungunuka poo uye kwakanyanya tembiricha kugadzikana inoratidza zvakafanana zvedongo zvivakwa. Yakakwira conductivity, yakakwira elastic modulus, yakanyanya kusungunuka poo uye kwakanyanya tembiricha kugadzikana inoratidza ayo akafanana zvedongo zvivakwa.
Tafura 1. Main Properties yeTi3SiC2 ceramics (Tembiricha yekamuri)
Zvidzidzo pakukundikana kusagadzikana kweTi3SiC2 zvinoratidza kuti kune hombe pseudo-plastiki kukuvara
zone pasi peiyo induction yeTi3SiC2. Chikonzero ndechekuti Ti3SiC2 ine akawanda magetsi ekumisikidza michina panguva yekukuvara kwekubatana, sekuparadzira microcrack, kutsemuka kwekuparara, zviyo zvinoburitsa, kukotwa kwezviyo, nezvimwewo. Zvekare, rudzi urwu rwezvinhu zvine yakanaka yekuzvigadzira mafuta. Iyi mhando yezvinhu ine yakafara application tarisiro senge yakakwira tembiricha chimiro zvinhu, yemagetsi brashi zvinhu, yekuzvidzora-yega mafuta, kupisa kupisa zvinhu nezvimwe. Nekudaro, iyo yakaoma kushoma kuomarara, kupfeka kuramba uye oxidation kusagadzikana kwe zvedongo zvinhu zvinodzora mashandisiro ayo munguva dzakaomarara senge kuneta kuramba, kupfeka kuramba uye oxidation kuramba.Iii. Kushanda kweTi3SiC2 yakaturikiswa zvedongo zvinhu
(I) Biomedical kunyorera
Mukurapa mazino, zvishandiso kana zvidimbu zvinoshandiswa munzvimbo yemumuromo zvinofanirwa kuve zvakagadzikana uye zvinogadziriswa kwenguva yakareba nekuda kweiyo oxidation. Ti3SiC2 ine zvese zvedongo uye simbi zvivakwa uye yakanaka biocompatibility, ichiita kuti zvikwanise kushandiswa mumuviri wemunhu. Ti3SiC2 inogona kugadziriswa kuita tambo dzehukuru hwakakwana pasina mafuta, saka inogona kugadzirwa kuita implants kana prosthetics yekushandisa kiriniki mune stomatology. Ti3SiC2's elastic modulus iri padyo neiyo enamel kana dentin kupfuura zirconia (1.9 × 105MPa), ichiwedzera mukana wayo wekushandisa kutumira kana ceramic korona yemukati. Ti3SiC2 zvigadzirwa zvinotorwa kubva kuzvizviparadzira yega-tembiricha zvinhu zvine porous tishu iyo inogona kuve nyore kuronga uye kusunga kune. Iyo yakaderera coefficient yekukwesana inoita kuti zvikwanise kuishandisa kune orthodontics kuwedzera kutsvedza uye kudzikisira kukakavara kuramba.
Corrosion kuramba uye oxidation kuramba mamiriro akakosha ekushandisa kwechinhu ichi munzvimbo yemumuromo uye nekugadzikana kwayo. Chinyorwa ichi nehupfu hwehupfu zvese zviri zviviri zvedongo, uye yavo inosunga degree inogona kunge iri nani pane iya yesimbi nevhu. Naizvozvo, chiyero chekushandisa kwechinhu ichi chingave chakapamhama chekramiki yemukati korona.
Nekudaro, mune yazvino inozivikanwa nzira yekugadzirira yeTi3SiC2, gadziriro yekugadzirira inofanirwa kuvandudzwa kuti uwane yakachena Ti3SiC2 mabhuroko, kuti unzwisise zvakanyanya uye zvakaringana zvivakwa zvezvinhu. Kuenderera mberi murabhoritari uye zvidzidzo zvekiriniki zvinodiwa kuti zvitsigire biocompatibility uye kugona kwechiitiko.
(2) mashandisirwo mune zvinopesana nezvinhu Nekufambiswa kwechimbichimbi kupfura tekinoroji mune zvedongo indasitiri, kushandiswa kwekutenderera kweiyo fenicha fenicha iri kupfupika uye mamiriro ekushandisa akaomesesa. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti uenderere mberi nekuvandudza kupisa kwemhepo kwehusiku yezvivakwa zvemidziyo yekusangana nezvinodiwa zvekuvandudza kwekukurumidza kupfura tekinoroji mu ceramic indasitiri.
Semhando yepamusoro-giredhi refractory, furni fanicha ine simba rakakosha pahunhu hwezvigadzirwa zvakapfurwa. Ti3SiC2 ceramics haina kunetseka nekupisa kwekushisa, yavo yakasarudzika yakarongedzwa dhizaini uye hunhu hwepurasitiki pane yakanyanya tembiricha inogona kudzikisira iko kukonzeresa kwekushushikana.
Zvinyorwa kuburikidza ne △ T = 1400 ℃ kupisa kupisa kwekusara kwesimba kuchiri pamusoro pe 300MPa, kupisa kupisa kwekushomeka kuita kweakanakisa kunogona kumira 900 difference tembiricha mutsauko. Panguva imwecheteyo, Ti3SiC2 ceramics ine zvakanakira kunaka kwemakemikari kusagadzikana, kugadziriswa kuri nyore uye yakaderera hama mutengo wezvinhu zvakagadzirwa, ichiita iyo yakanaka kilani fenicha yezvinhu inofanira kugadzirwa.
Pashure: Titanium Stannum carbide, Ti2SnC
Zvadaro: Aluminium vanadium Carbide, V2AlC